यसकारण लिनुस् नेपालमै उच्चशिक्षा, विदेश मोहले के बेफाइदा ? - nayakhoj24.com
प्रकाशित मिती August 13, 2017 | nayakhoj24 admin
२८ साउन, काठमाडौं । यतिबेला विदेशी शिक्षा र विदेशी डिग्रीप्रति नेपाली युवाहरुको जर्वजस्त आर्कषण देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता र गच्छेले भ्याएसम्म प्लस-टू सकेपछि विदेशतिरै जाने युवाहरुको संख्या ठूलो छ ।
तर, अक्सर मिडियामा चर्चा नहुने अर्को पाटो पनि छ । नेपालका नाम चलेका केही यस्ता कलेजहरु पनि छन्, ५०/६० जनाको सिटमा भर्ना पाउन हजारौंले आवेदन गर्छन । त्यस्ता कलेजमा भर्ना पाउनु ठूलै सफलता मानिन्छ ।
नेपालमै उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न यस्तो जर्बजस्त आर्कषण पछिल्ला दिनमा देखिएको छ ।
नेपालमै पढ्ने जमातलाई अहिले अवसर पनि यहाँ नै मिलिरहेकै छ । विदेशमा पढ्नभन्दा कमाउन जाने ट्रेण्डलाई मोड्न स्वदेशी कलेजहरुले भरपूर प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
नेपालमा विभिन्न विषय पढेका विद्यार्थी विदेशी कलेजमा पढेकाभन्दा अब्बल रुपमा अघि आएका छन् । विभिन्न स्टार्ट-अप कम्पनीहरुमा नेपाली कलेजमै पढेका विद्यार्थी बाक्लो रुपमा देखिनुले अवसरका अनेकन सम्भावनाहरुलाई उजागर पनि गरेका छन् ।
नसक्नेले मात्र नेपालमा पढ्ने भन्ने आम धारणा बिपरित राम्रो नम्बर ल्याएका, राम्रै आर्थिक हैसियत भएका विद्यार्थीको आर्कषण किन नेपालको उच्च शिक्षाप्रति देखिएको होला ? अब के विदेशिने विद्यार्थीलाई नेपालमै पनि अवसरहरु छन् भन्ने देखाउन सकिने समय आएको हो ? यो अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
शनिबारदेखि काठमाडाैंको होटल अन्नपूर्णमा ‘स्टडी इन नेपाल’ एक्स्पो सुरु भएको सन्दर्भमा नेपालको उच्च शिक्षाको प्रर्बद्धनमा खटिएका केही कलेज सञ्चालक तथा विभिन्न संकाय प्रमुखलाई हामीले नेपाली उच्च शिक्षाको अवसरबारे हामीले कुरा गरेका छौं ।
विदेशी भन्दा कम छैनौं, विश्वास गरियोस्
कार्यकारी निर्देशक , लर्डबुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशन
नेपालमा अहिले शैक्षिक वातावरण सुध्रँदै गएको छ । अहिले विदेशमा पढ्न जाने एउटा लहड चलेको छ । यो घट्ने स्थितिमा देखिएन । तर, एउटा समयमा यो रोकिनु त पर्छ नै ।
नेेपालको शैक्षिक वातावरणलाई थप विश्वसनीय बनाउन र विद्यार्थीलाई स्वदशेमै रहेर पढ्न र काम गर्न सरकोरवालाहरुले प्रोत्साहन गर्ने प्रयास नै गरेनन् ।
सरकारले पनि हजारौं विद्यार्थी पढाइकै लागि बाहिरिरहेको अवस्थालाई समान्य मानेको छ । अब नेपालको शैक्षिक गुणस्तर बाहिर सोचिए र भनिएजस्तो छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी आज विश्वबजारमा जहाँ पनि सक्षम बनेर प्रस्तुत हुने अवस्था छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के भयो भने यहाँ पढि्दन भनेर बाहिर गाएका विद्यार्थी यहाँको भन्दा कम गुणस्तरको अध्यापन हुने कलेजमा पुगेका छन् । कमजोर कोर्सलाई उनीहरुले त्यहाँ गएर पढ्नुपरेको छ ।
यहाँ दलालको चक्करमा लाखौं बुझाएर उनीहरु बाहिरिरहेका छन् । यहाँ बस्दा हुने फाइदालाई न त विद्यार्थीले बुझिरहेका , न त अभिभावकले नै ।
यहाँ बस्दा फेमिलीसँग बस्न पाइन्छ । प्रायः अहिले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको वर्ग हर्दा १८ देखि २२ वर्षका छन् । यो उमेर भनेको परिवारसँग नै रहने हो । यही उमेरमा नै परिवारले आफ्ना सन्तानको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हो ।
तर, यहाँ उल्टो भइरहेको छ । आफुसँग बच्चा बसोस् भन्ने सोच्नुभन्दा बाहिर जाओस् र सानैदेखि कमाओस् भन्ने धारणा अभिभावकमा देखियो ।
यसले गर्दा विदेश पुगेका विद्यार्थीहरुबारे दैनिक जसो दुःखद् खबरहरु सुन्नु परेको छ । हामीसँग यहाँ म्यानेजमेन्ट, आईटी, नर्सिङ लगायतमा निकै उच्च गुणस्तरको पढाइ हुने गर्छ ।
तर, यसलाई किन विश्वास गरिएन भन्ने समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । राम्रो पढ्ने विद्यार्थी नेपालमै नरहने र विदेश गएर पनि उतै हराउने स्थितिले देशलाई अध्याँरोमा धकेल्छ ।
यहाँ प्राप्त हुने उत्कृष्ट शिक्षालाई नकार्दा विदेश पुगेर अनेकन हण्डर खानेको संख्या पनि कम छैन ।
अब त यसबारे एउटा सचेतना अभियान नै चलाउन आवश्यक छ जस्तो देखिरहेको छु । किनभने अब विद्यार्थी र अभिभावकमा सचेतना जरुरी छ ।
विदेश पठाउने फेसन जस्तो बनाउनु भएन । अहिले आफ्नो छोरा-छोरी विदेश छन् भन्दा गर्व गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गयो । अब यो रहिरहनु हुन्न ।
किशोर अवस्थामै लाखौं ऋणको बोझ र तनाव बच्चालाई बोकाएर विदेश पठाएर हुन्न । यहाँ कहाँ-कहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर अभिभावकले नै खोजुन् ।
विद्यार्थीमा पनि त्यो अवेरनेश जरुरी छ । स्कुल-स्कुलमा यसबारे सचेतना कक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
बिचाौलियाले पैसा खाएर यहाँको भन्दा कम गुणस्तरको शैक्षिक अवस्था भएका विदेशी कलेजमा विद्यार्थी पुर्‍याइरहेका छन् ।
यो कुरा उनीहरुले बुझे भने स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षा अझै प्रवर्द्धन हुन्छ भने विद्यार्थी र अभिभावकले दुःख पाउँदैनन् । राम्रो पढ्नेलाई अवसर त यहाँ जति विदेशमा छैन ।
यहाँ अवसर नभए विदेशमा पढेकाहरु पछिल्लो समयमा किन नेपाल आउँदैछन् त ? त्यसैलेआफू सबल बन्ने प्रण भए पढ्नका लागि नै विदेश गइराख्नुपर्दैन ।
पर्याप्त अवसर नेपालमै छ
प्रिन्सिपल, नर्भिक बिजनेश कलेज
अहिले अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । तर, पछिल्लो समयमा नेपालमै पढ्नुपर्छ भन्नेहरु पनि बढ्दैछन् ।
नेपालको उच्च शिक्षामा अहिले सेमेस्टर प्रणाली लोकप्रिय बन्दै गएको छ । विदेशमा पनि यस्तै प्रणालीमा पढाइ हुने हो । यहाँ अहिले युनिभर्सिटीहरु पनि अब्बल कोर्सहरु डिजाइन गरिरहेका छन् । यि कोर्सहरु विश्वस्तरीय छन् । अब यहाँ पढेका विद्यार्थी विदेश पुगेपनि उसलाई त्यहाँ जम्न असहज हुँदैन ।
केही समयअघि सम्म यहाँ सेमेस्टर थिएन । त्यसैले विद्यार्थीहरु विदेश जान बढी प्रयत्न गर्नु स्वभाविक थियो । तर, अब यो अवस्था हटिसकेकाले विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययनको मोह पनि हट्नुपर्छ ।
अवसरको कुरा गर्ने हो भने विदेशमा पढ्नेलाई भन्दा यहाँ नै पढ्नेलाई बढी अवसर छ । अब देश आर्थिक विकासको बाटोमा छ । विकसित देशमा भन्दा विकासशील देशमा नै बढी अवसर हुन्छ ।
अब त्यसलाई पहिल्याउने विद्यार्थीको क्षमता हुनुपर्छ । अब नेपालका कलेज ‘थ्यौरी’ विषय मात्रै पढाउँदैनन् । प्र्याक्टिकल एजुकेशन सिस्टम हामीसँग अाइसक्यो । हामी अहिले विश्वमै प्रचलित शैक्षिक प्रणालीलाई अबलम्बन गरेर अघि बढिरहेका छौं ।
त्यसैले कोही पनि नेपालमा राम्रो पढाइ हुन्न भन्ने कन्फ्युजनमा पर्नुपर्ने छैन । हाम्रा कोर्सहरु पनि विश्वका अन्य देशको भन्दा कमजोर छैन ।
त्यसैले अब त सकेसम्म विद्यार्थीले मातृभूमि मै बसेर यहाँ नै आफ्नो लगानी र पसिनालाई सार्थक बनाउन आवश्यक छ ।
ऋण काढेर विदेश जाने अनि भएको पढाइको स्तर पनि खस्काउने अहिलेको गलत ट्रेण्ड मोड्न यहाँका कलेजहरुलाई विश्वास गर्नसक्नुपर्छ ।
विदेशमा कमाउने चक्करमा भविष्य बिगार्ने कि नेपालमै बसेर राम्रो पढेर भविष्य सुरक्षित गर्ने भन्ने निर्णय विद्यार्थी र अभिभावकले सचेत भएर लिनुपर्छ । परिवार र साथीसंगीबाट टाढा बस्दाको पीडा त अर्को पटोमा छँदैछ ।
नेपालमै बसेर उत्कृष्ट तवरको शिक्षा हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नु नै अहिले बुद्धिमतापूर्ण हुने देख्छु म । क्वालिटी एजुकेशन हामीसँग नै छ । अवसर त यहाँ जति विदेशमा छैन ।
हामी ठोकुवासाथ भन्न सक्छाैं , यहाँ नयाँ काम गर्न अवसर प्रशस्त छन् ।
हामी विदेश जाने हैन, यता विदेशी विद्यार्थी ल्याउनुपर्छ
सिईओ, एभरेष्ट कलेज, थापाथली
नेपाल एजुकेशनका मामिलामा अहिले तीव्र रुपमा क्वालिटीमा अपग्रेड हुँदै गरेको देश हो । अब हामी पनि विश्वस्तरको शिक्षा यहाँ दिन सक्षम बनेका छौं । यहाँ केही समस्या भने छन् । तर, हामी प्रगतिको पथमा निरन्तर अघि बढेका छाैं ।
हाम्रो एभरेष्ट कलेज थापाथलीमा बीबीए प्रोग्राममा ६४ सीट मात्रै छ । तर, यसमा पढ्नका लागि आवेदन दिनेको संख्या १२ सय माथि हुन्छ । नेपाली शिक्षाको गुणस्तरक कमजोर भएको भए यो अवस्था हुन्थ्यो र ? तर, यहाँ रहन चाहाने विद्यार्थीका लागि पूर्वाधार त्यसअनुरुपको वातावरण नभएर नै समस्या भएको हो ।
अभिभावकले चाहेका कारण पनि धेरै विद्यार्थी बाहिर गए । तर, अब यो अवस्था सँधै रहनुहुँदैन । हामीले थालेको गुणस्तरीय शिक्षालाई अझ प्राक्टिकल बनाएर अझै धेरै प्रयासहरु गरौं ।
युनिभर्सिटी कलेज र सिलेबल्स डिजाइन गर्नेहरुले राम्रो कोर्स डिजाइन र अपटूडेट गर्न नसक्दा क्वालिटीमा समस्या अब हट्नै गइहरेको छ । यसले विद्यार्थीले आफूले चाहेको स्तरको डिग्री हाँसिल गर्न नसकेको र कोटको सीमितताले पनि विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्यता पनि हट्दै छन् ।
अब हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई यहाँ नै पढाएर यहाँ नै प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न हामी लागिरहेका छौं । हो, नेपालमा सम्भावना नभएका होइन, देशलाई एजुकेशन हबको रुपमा विकास गर्ने ठूला सम्भावना छ ।
हेर्नुस् त यो देश कति सुन्दर छ ? हरेक ५० माइलमा यस्तो बायो डाइभर्सिटी छ । यहाँ अध्ययन अध्यपनका लागि कल्चरका स्टुडेन्ट विदेशबाटै आउने सम्भावना छ । हामी अब हाम्रो विद्यार्थी पलायन रोक्दै त्यतै अघि बढ्नुपर्छ ।
यहाँ हुनेे नेचुरेल डिजास्टरबारे अन्वेषण गर्ने र हिमश्रृंखलाबारे अध्ययन र अध्यापन गराउन सकिन्न र ? बुद्धीज्मबारे पनि यहाँ स्टडी गराउन सकिन्छ । यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यी विषयमा विदेशीहरुबाट अनुभव लिएर कोर्सहरु डेभलप गरेर विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउन अब काम हुनुपर्छ ।
आज हामी मेडिकलमा नम्बर वान हुन सक्छौं । इञ्जिनियरिङ, म्यनेजमेन्ट, टुरिज्म, लिबरल आर्टस् र बुद्धिज्म विषयमा पनि हामी यहाँ विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सक्छौं । यति विषयलाई राम्रोसँग अघि बढाएको खण्डमा हामी शैक्षिक हब बन्न सक्छौं ।
हामी त नेपाली विद्यार्थी रोक्ने चुनाैतिका बीचमा धेरै सम्भावना पनि लिएर बसेका छाैं । मेडिकलका लागि श्रीलंका र भारतका विद्यार्थी यहाँ आउन सक्छन् ।
सरकारले सोचेर काम गर्ने हो भने जोर्डन, कुवेत र अफगानिस्तानबाट नेपालमा विद्यार्थी पढ्नका लागि आउन सक्छन् । ७ महिनाअघि अफगानिस्तानका शिक्षा मन्त्रीले कसरी नेपालमा अध्ययन गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरेर फर्किएका छन् ।
तर, यहाँका कर्मचारीतन्त्र र पोलिसी लेभलमा भएकाहरुले यसलाई अवसर हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । सरकारले राम्रो नीति बनाउने हो भनेर सार्क मुलुक बाहेककाबाट पनि नेपालमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउन सक्छन् ।
हामी कुनै बेला विदेश गाएर नेपाल जाऔं भन्ने दिन आउनुपर्छ । त्यो दिन आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौं । त्यसका लागि राजनीतिक तह र उच्च शिक्षा सेवा प्रदायकमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यहाँ ग्लोबल्ली रिकगनाइज्ड डिग्री यहाँ प्रोभाइड गर्न सकियो भने सम्भावना धेरै छ ।
यहाँको शैक्षिक पद्धतिमा सुधार गर्दै त्यस्ता सम्भावना भएका विषयलाई राज्यले नै प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । सबै किसिमले वातावरण तयार हुनुपर्छ । हामी विदेशबाट विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सक्छौं ।
हामीले उठाएका सवाललाई राष्ट्रिय स्वार्थमा रुपमा बुझेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई ब्यक्तिगत रुपमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकियो र यहाँका डिग्री विश्वस्तरको हुने गरी कोर्सहरु डिजाइन भएर संयन्त्रहरु तयार भए भने हामी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन किन सकिन्न र ? अब राज्यले यसतर्फ सोच्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।
नेपाली कलेजहरू अब विश्वस्तरका भएका छन् भन्ने कुरा हामीले अब चिच्याएर भनिरहनुपर्ने छैन । हामीले केही सहज वातावरण भने पक्कै बनाउनुपर्नेछ । यो प्रयास मुलतः सरकारबाटै हुनुपर्छ ।
क्वालिटी मात्रै हैन करियर पनि नेपालमै छ
जीवन लामा गोले
प्रवन्ध निर्देशक, एजुकेशन डटकम नेपाल
नेपालमा अहिले बिश्वभरिका राम्रा कोर्षहरु यहीँ पढाइ हुन्छ । नेपालका बिश्वबिद्यालयका सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरुले पनि अन्तराष्ट्रियस्तरकै शिक्षा दिइरहेका छन् । त्यसैले अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा लिन विदेशिनु पर्दैन । त्यही सन्देश दिन हामीले मेला आयोजना गरेका हौं ।
खासगरि प्लस टु पास गरेर ब्याचलर लेभलको अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने बिद्यार्थीलाई नेपालमै उपलब्ध उत्कृष्ट कोर्ष र अबसरबारे जानकारी दिएर नेपाली विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नु हाम्रो उद्देश्य हो । मेलामा म्यानेजमेन्ट, आइटी, ह्युमानिटिज लगायतका फ्याकल्टीमा उपलब्ध कोर्षहरुबारे जानकारी दिइने छ ।
कुनै पनि बिद्यार्थीले स्वदेशमै पढ्यो भने यहाँ के अबसर छन्, कस्तो वातावरण छ र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा जानकारी पाउँछ र कोर्स सकेपछि नेपालमै राम्रो करियर बनाउन सक्छ ।
विदेश पढ्न गएर फर्केर आउने निकै कम छन् । जसले नेपालको युवाशक्ति पलायन भइरहेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मुलुकको विकासमा परिरहेको छ । त्यसैले उत्कृष्ट युवाशक्तिलाई यहीं पढ्न प्रेरित गर्ने, यहाँ उपलब्ध अबसरबारे जानकारी दिने र देशमै उत्कृष्ट प्रतिभाहरुलाई अबसर सिर्जना गर्ने उदेश्यले मेला आयोजना गरिएको हो ।
नेपालमा पनि उच्च गुणस्तरको उच्च शिक्षा सुलभ शुल्कमा मिल्छ भन्ने कुरा अब प्रमाणित छ । मात्रै अब अभिभावक र विद्यार्थीले विश्वास गर्न बाँकी हो । यही कुरा थाहा नपाउँदा लाखौं खर्चेर विद्यार्थीहरु विदेशिनु परेको छ । अब यो कुरा रोक्नुपर्छ भनेर नै हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।
अब सँधै यहाँबाट विद्यार्थीहरु लगातार ठूलो रकम खर्चेर ऋणको भारी बोकेर विदेश जाने अवस्था बनाइरहनु हुँदैन । धेरै त्यस्ता कलेजहरु यहाँ छन्, जसले विदेशमा दिने स्तरभन्दा माथिका शिक्षा दिइरहेका छन् ।
ति कलेजलाई विद्यार्थीसँग कनेक्ट गराउन मेला गर्न लागेका हौं । हामीले विगत ३ वर्षदेखि नेपालमै पढौं भन्ने कुरालाई प्रवर्द्धन गर्न फरकम किसिमको मेला पनि गरिरहेका छौं । यो वर्षको मेलाले यो कुरालाई अझ बढी यो विषयमा सचेतना प्रदान गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
अब नेपालमा अध्यापन भइरहेका विशिष्ट कोर्सहरुबारे विद्यार्थी तथा अभिभावकले परामर्श गर्नुपर्छ । यो वर्षको मेलामा विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक पनि सहभागी हुनेछन् । धेरै अभिभावकलाई पनि हामी नेपालमै बिशिष्ट कोर्सहरु राम्रो गुणस्तरका साथ पढाइ हुन्छ भन्ने बुझाउनेछौं ।
यहाँ विभिन्न कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयलेको सम्बन्धन लिएर स्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । तर, विद्यार्थी र अभिभावकलाई विदेशी शिक्षा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रम छ । त्यसलाई यो मेलाले चिर्नेछ ।
नेपालमै नयाँ सोचका साथ काम गर्नेहलाई स्वदेशी कलेजकै शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ । अब हामी स्वदेशी शिक्षालाई विश्वास गरौं अब पनि हामी विदेशमै मात्रै राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर दौडिरह्यौं भने सही गन्तब्यमा पुग्न सक्दैनौं ।
विश्वस्तरीय कोर्ससँगै क्वालिटी पनि हामीसँगै छ
प्रोग्राम कोर्डिनेडर, नेपाल कलेज आफ म्यानेजमेन्ट
नेपालमा हामीले नै बीबीए र बीएचटीएम १८ वर्षदेखि पढाइरहेका छौं । अहिले यस्तै विषयका लागि पनि विदशे मै गएर पढ्ने क्रम बढ्दो छ । तर, हामी के विश्वास दिलाउन चाहान्छौं भने हामी गुणस्तरीय शिक्षाका मामिलामा कमजोर छैनौं ।
अहिले विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या हेर्नुभयो भने पढ्न जानेभन्दा काम गर्न जानेको संख्या धेरै छ । पढ्छु भन्ने भन्दा पनि कमाउँछु भन्ने मानसिकता बढी देखिन्छ । यसले त्यो विद्यार्थीको भविष्य कता जाला ? अभिभावक पनि यसतर्फ सचेत छैनन् । केही समयमा यहाँ नै दुःख गरेर पढौं । अवसर यहाँ नै आफ्नो ढोका ढक्ढकाउन आइपुग्छ ।
भोलि त्यो विदेशमा पढ्न भन्दा काम गर्न बढी ध्यान दिएको जनशक्ति नेपाल आउँदा त्यसको लाभ देशले कसरी लिन सक्छ । त्यसरी पढेर अएकाहरुलाई यहाँ आएर काम गर्न पनि सहज छैन । कामका लागि यहाँ पढेका विद्यार्थीले विस्तारै भएपनि वातावरण बनाएका हुन्छन् ।
यहाँको परिरिस्थतिसँग ऊ भिजिसकेको हुन्छ । विदेशको पढाइ भन्दा हामी कुनैपनि एंगलमा कमजोर छैनौं । हामीले हाम्रो एजुकेशनको बढ्दो गुणस्तरलाई ब्राण्डिङ गर्न सकिरहेका छैनौं ।
यहाँ प्राप्त हुन सक्ने अवसरबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । म्यानुफ्याक्चिरिङ र सर्भिस सेक्टरमा हामीले अहिले जुन किसिमबाट प्रगति गरिरहेका छौं, त्यो नै यहाँ पढ्ने विद्यार्थीका लागि ठूलो अवसरको कुरा हो ।
यहाँ अवसर पाइँदैन भन्ने भ्रम मात्रै हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा विद्यार्थीको आफ्नो खुबी, क्षमता र भिजन हो । त्यसका धेरै उदाहरणहरु हामीसँग छन् ।
अहिले युनिभर्सिटीहरु पनि नेपालका कोर्सहरुलाई फरक र विश्वस्तरीय बनाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । जस्तै हामी होटल एउण्ड टुरिजम म्यानेजमेन्टको मर्ज गरेर तयार भएको कोर्स पढाइरहेका छौं । यस्तो कोर्स विश्वमा नै छैन ।
हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थी आज विश्वका जुन कुनामा पुगेपनि पढाइकै आधारमा अब्बल बन्न सक्छ । दोहोरर्‍याएर भन्छु, त्यसैले पढ्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अब छैन ।
मात्रै, विद्यार्थीले आफ्नो क्षमतालाई चिनेर नेपालमै पढछु र यहाँनै केही गर्छु भन्ने हुनुपर्छ । सबैथोक आफ्नै अघि छ । विदेश जाँदा लाग्ने लगानीले यहाँनै पढेर आफ्नै बाटो तय गर्न सकिन्छ ।
(हामीले यो समाचार अनलाइन खबर डटकम बाट साभार गरेका हौ .)